Hiran State - News: R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar A/rashiid oo sheegay in wadanka ay ka dhacdo doorasho si kumeel gaarka looga baxo.
R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar A/rashiid oo sheegay in wadanka ay ka dhacdo doorasho si kumeel gaarka looga baxo.
Wareysi dhinacyo badan taabanaya oo ay idaacada BBCdu la yeelatay R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar C/rashiid Ali Sharm,arke ayaa isagu ku nuux nuuxsaday in la joogo waqtigii ay umada Soamliyeed ka bixi laheyd nidaamka qaldan ee ku meelgaarka.
R/wasaarahii hore Dr Cumar A/rashiid oo uu wareystay wariyaha caanka ah Cabdirisaaq Xaaji Catoosh ayaa runtii su'aalo loo baahnaa waqtigan adag ee dalka iyo dadka Somaliyeed u baahan yahiin bad baado isagu weydiiyey sida uu u arko R/wasaarahii hore mudada ay xukumadii isaga ka danbeysay codsatay in loogu daro waxuuna sheegay in aysan Somaliya ku sii jiri karin waqtigan adag ku meel gaar. mar la weydiiyey ineysan macquul aheyn iney xiligan doorasho dhacdo ayuu sheegay in aysan doorashadu ka dhaceyn dalka oo dhan cida wax dooraneysana ay yahiin 550 mudane oo kaliya sidaaasi daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in ay doorashadu dhacdo waqtigii loogu talo galay.
R/wasaare Cumar oo isagu qodob qodob u qaadaan dhigayey su,aalkasta oo la weydiiyo ayaa ku jawaabay xukumadan hada jirto wax badan oo ay qabatay ma jirto waxeyna ilaa hada sheegataa howshii ay xukumadiisu ka tagtay oo kaliya sida in ciidamda dowlada ay gobolada dalka ku baahiyeen, iney ciidamda mushaar siiyeen, inuu baarlamaanka Somaliya hortooda yiri ila xisaabtama aniga iyo golaheyga wasiirada iyo wax la mid ah xili la weydiiyey bal iney xukumadiisa mudadii ay jirtay sameysay wax miisaanid ah.
Sidoo kale R/wasaarahii hore ayaa yiri waxa kaliya ee ay xukumadii hore iyo midan ku kala duwan yahiin waa iney waxkasta idaacadaha ka sheegtaan. R/wasaarahii hore ee Somaliya Dr Cumar A/rashiid ayaa ugu danbeyn ku nuux nuusaday inuu gursigii uu ku fadhiyey ugu tanaasulay si shacabku mar uun ugu baxaan kumeel gaarkan iyo waqtigan adag ee kala guurka ah.
Mar uuka hadlayey dhaqalaha ayuu sheegay inuu jeebka ku sugan jiray madaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif maadama lacagahalaga soo qaado wadamada Carabta ay inta badan ahaayeen lacago cadaan ah, mana la soo marsiin jirin wasaarada maaliyada.
R/wasaarahii hore ee Somaliya Cumar A/rashiid Ali Shar'marke waxuu ka soo jeedaa qoys magac iyo maamuus ku lahaa siyaasada Somaliya waxaa dhalay siyaasigii caanka ahaa A/rashiid Ali Shar'marke oo isagu ka mid ahaa hogaamiyaashii taariikhda wanaagsan uga tagay bulshada Somaliyeed mudadii uu hayey xilka R/wasaaraha Somaliya markii uu yimid qilaafkii dhax maray madaxweynaha iyo isaga waxuu gursigiisa uga tagay muran la'aan.
Nasiib wanaag madaxweynahii ay qilaafka ku kala tageen maanta waxey qoorta iskugu jiraan gudoomiyahii baarlamaanka Somaliya, halka xukumadii uu soo magacaabay R/wasaare Farmaajona ay kaka dhagtay 1 sano ayaanu rabnaa. wadankii waxaa ku soo qulqulaya ciidmo African ah. shacabkii waxaa heysta dhibaatooyin iskugu jira abaaro, colaad iyo gaajo. 100kii maalmood ee ay horey u qabsatay xukumada Farmaajo waxey ku dhamaatay safaro dibadaa,ciidamada Somaliya ee ku sugan gobolada dalka waxaa lagu sameeyaa cadaalad daro oo kuwa Gedo ku sugan oo kaliya ayaa ciidamo Somaliyeed ah oo baahidooda la daboolaa, halka kuwa kale aysan jirin cid u hadleysa amaba Somalinimadooda ku ixtiraameysa. magaalada Mogdisho oo ah caasimadii Somaliya garoonka diyaaradaha iyo Villa Somaliya maahane inta kale waxaa maamula Jeejniyaan, Afganistaan, Bakistaan, Carab, Eretariyaan, Bangaladhesh. sidoo kale madaxweynaha Somaliya iyo R/wasaare Farmaajo waxaa waardiye ka haya ciidamo Uganda iyo Burundi ka socda waxaana biila ciidankaas caruurtooda iyo xaasaskooda dowladaha yurub.
Waxaasi oo dhan hadeysan xukumada maanta jirta sharaf daro u arag shacabka Somaliyeed walito wadani uma dhalan hadow u dhashayne jaanis ma helin waa sida ay inta badan bulshada Somaliyeed qabaan. marka laga soo tago wareysiga R/wasaarahii hore ee Somaliya hadane shacabka Somaliyeed maanta waxey heystaan jaanis weyn oo ay uga bixi karaan nidaamka TFGda amaba ku meel gaarka, inkasta oo la xaqiijiyey 35% shacabka Somaliyeed ineysan fahamsaneyn waxa laga wado TFG iyo dhibaatada dalka iyo dadka Somaliyeed ku dhaceysa.
· admin on May 09 2011 02:42:47 · 0 Comments · 2881 Reads ·
14,633,849 unique visits